» अनलाईनमै मिटिङ, जुम क्लाउड मिटिङ एप के हो ? यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने ?
अनलाईनमै मिटिङ, जुम क्लाउड मिटिङ एप के हो ? यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने ?
२४ चैत्र २०७६, सोमबार १२:३२
मकवानपुर, २४ चैत । जुम क्लाउड मिटिङ एप्लिकेसनका बारेमा पहिलेका तुलनामा अहिले धेरै जना मानिसहरु जानकार छन् । हुन त जुम क्लाउड मिटिङ एप सन् २०१४ जनवरी २४ मै गुगल प्ले स्टोरमा सार्वजनिक भएको हो । अहिले मानिसहरु बाहिर निस्कन नपाएको अवस्थामा पनि ईन्टरनेटको पहुँच छ भने यसै एपबाट मिटिङ गर्न, अध्ययन गर्न र छलफलमा सहभागी हुन पनि सकिन्छ । यसलाई गुगल प्ले स्टोरबाट १० करोडभन्दा बढी पटक डाउनलोड गरिएको छ भने यो पछिल्लो पटक २४ मार्च २०२० मा अपडेट गरिएको छ । जुम त्यस्तो एप हो जसबाट १०० जनासम्म मानिसलाई अनलाईनबाट एकैपटक मिटिङ गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा स्क्रीन शेयर गर्ने सुविधाका साथै एचडी भिडियो कलिङ सेवा पनि उपलब्ध छ । जुममा मिटिङ वा अध्ययन गर्दा तपाई आईडी बनाएर वा नबनाएर पनि सहभागी हुनसक्नुहुन्छ । साथै फ्रिमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ । यस एपको फ्रि भर्सनमा ४०–४० मिनेटमा भिडियो कलिङ रोकिन्छ र फेरि कल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पेड भर्सनमा भने समयको कुनै सिमा तोकिएको छैन । तपाई अनलिमिटेड समयसम्म यसलाई मिटिङ गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यस भिडियो सामग्रीमा हामी तपाईलाई मोबाईल र कम्प्युटरमा जुम एप कसरी ईन्स्टल गर्ने, कसरी आईडी बनाउने र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा पूरा जानकारी दिँदैछौँ । एपमा आईडी बनाउँदा अलि गारो लाग्नसक्छ तर तपाईले प्राक्टीकल्ली गर्नुभएमा सजिलै सक्नुहुनेछ । म यस भिडियोमा पुरा जानकारी स्क्रीन सहित देखाउँदैछु, कृपया भिडियो अन्तिमसम्मै हेरिदिनुहोला ।
जुम एपलाई कम्प्युटरमा प्रयोग गर्नका लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाई कम्प्युटरको कुनै पनि ब्राउजरमा जानुहोस् । क्रोम, फायरफक्स अथवा जुनसुकै ब्राउजरबाट तपाईले जुम टाईप गरी सर्च गर्नुहोस् । यसरी सर्च गरेपछि तपाईले पहिलो नम्बरमै जुम भिडियो कन्फ्रेसिङ भनेर जुमको अफिसियल वेबसाईट देख्नुहुनेछ । त्यहाँ केही तल तपाईले डाउनलोड भन्ने अप्सन पनि देख्नुहुनेछ । त्यसपछि तपाईले त्यही डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् । त्यसपछि जुमको अफिसियल वेबसाईट खुल्छ र तपाईले त्यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्नुहुनेछ । त्यहाँ क्लिक गरेपछि जुमको ईन्टलेसन फाईल डाउनलोड हुनेछ । डाउनलोड भईसकेपछि अब त्यो डाउलोडेड फाईललाई क्लिक गरी ईन्स्टल गर्नुहोस् । इन्स्टल भईसकेपछि एप सुचारु हुनेछ अथवा सुचारु नभएमा तपाईको कम्प्युटरको स्टार्ट मेनुमा गएर स्टार्ट जुम भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् । त्यसपछि एप्लिकेसन खुल्नेछ । तपाईले एपमा जोईन अ मिटिङ अथवा साईन ईन भन्ने दुई वटा अप्सन देख्नुहुनेछ । तपाईले यदि आईडी बनाउन चाहानुहुन्छ र जुम प्रयोग गर्ने अन्य साथीहरुको मिटिङमा जोईन हुन चाहानुहुन्छ भने सिधै जोईन अ मिटिङ अप्सनमा गएर साथीले दिएको मिटिङ आईडी र पासवर्ड दिएको छ भने पासवर्ड पनि हालेर जोईन गर्न सक्नुहुनेछ । अथवा तपाईसँग आईडी पहिले नै बनिसकेको छ भने साईन ईनमा क्लिक गरेर तपाईको आईडी र पासवर्ड हालेर साईन ईन गर्नसक्नुहुनेछ ।
मिटिङमा जोईन गर्ने अप्सनमा जाँदा साथीले दिएको मिटिङ आईडी र मिटिङमा तपाईको नाम कुन राख्ने त्यो राखेर जोईन गर्नसक्नुहुन्छ । त्यसको तल दिएको ३ वटा अप्सनहरुमा तपाईले केही नगर्दा पनि हुन्छ । जानकारीको लागि पहिलो अप्सनमा तपाईले भर्खरै राख्नुभएको नामलाई सम्झने कि नसम्झने भन्ने अप्सन दिइएको छ । यसमा क्लिक गर्नुभएमा अर्को पटक अर्को मिटिङमा जोईन् हुनेबेलामा पनि त्यही नाम देखाईहाल्छ । तलको दोस्रो अप्सनमा अडियो बन्द हुन्छ र तेस्रोमा क्लिक गर्नुभएमा भिडियो बन्द हुन्छ तर तपाईलाई अडियो कल र भिडियो कल दुबै आवश्यक छ भने त्यसमा क्लिक नगरी जोईनमा क्लिक गर्नसक्नुहुन्छ । तपाई साईन ईन गर्नुहुन्छ भने आईडी र पासवर्ड हालेर अथवा साईडमा दिइएको गुगल, फेसबुक जस्ता माध्यमबाट पनि साईन ईन गर्नसक्नुहुन्छ ।
यदि तपाईसँग आईडी छैन भनेचाहिँ अरुको मिटिङमा मात्र सहभागी हुनसक्नुहुन्छ । आफैले मिटिङ सुरु गर्न भने साईन ईन गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि तपाईले सुरुमा आईडी बनाउन सक्नुहुन्छ । आईडी बनाउनका लागि साईन ईनमा थिचेपछि आउने अप्सनको तल साईन अप फ्री भन्ने अप्सन देख्नुहुनेछ । त्यहाँ क्लिक गरेपछि ब्राउजरमा एउटा लिंक खुल्नेछ र साईन अपका लागि तपाईको ईमेल आईडी माग्छ । तपाई ईमेल आईडी राखेर साईन अपमा क्लिक गर्नसक्नुहुन्छ । यसो गर्दा कहिलेकाँही सेक्युरिटी चेकको अप्सन पनि आउँछ । नआएमा सजिलै हुन्छ तर आउँदा चाहिँ तपाईले कार, बस वा जेब्रा क्रसजस्ता अप्सन भएको फोटो जति सबैमा क्लिक गरेर भेरिफाई गर्नुपर्छ । यसरी भेरिफाई गरेपछि तपाईको ईमेलमा जुमबाट एउटा म्यासेज आएको हुन्छ र त्यहाँ एक्टीभेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्नेहुन्छ । त्यो अप्सनमा क्लिक गर्दा तपाई जुमको वेबसाईटमा पुग्नेहुनेछ र त्यहाँ तपाईले आफ्नो नाम, थर र पासवर्ड हाल्नुपर्छ । पासवर्ड दुई ठाउँमा हाल्दा कम्तीमा ८ वटा अक्षर वा अंकको हुनुपर्छ । त्यस पासवर्डमा कुनै एउटा अक्षर क्यापिटल लेटरमा, कुनै एउटा स्मल लेटरमा, कुनै एउटा नम्बर र कुनै एउटा स्पेशल क्यारेक्टर जस्तै एट द रेट, ह्यास लगायतका चिन्ह समावेश हुनु जरुरी छ । अन्यथा पासवर्ड भएन भन्ने म्यासेज आउँछ र तपाई आईडी बनाउन सक्नुहुन्न । यसरी पासवर्ड मिलाएर हालेपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस् । त्यसपछि कसैलाई ईन्भाईट गर्ने हो भन्ने अप्सन आउँछ तर त्यसमा तपाईले तल रहेको स्किप अप्सनमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्नसक्नुहुन्छ । त्यसपछि तपाईले स्टार्ट अ मिटिङ वा गो टु माई एकाउन्ट भन्ने अप्सन देख्नसक्नुहुन्छ । त्यहाँ तपाईले सिधै मिटिङ सुरु गर्न वा तपाईको एकाउन्टमा गएर अन्य जानकारीहरु राख्न वा फोटोहरु राख्नसक्नुहुन्छ । यो त भयो एप ईन्स्टल गर्ने र आईडी बनाउने तरिका । अब हामी कम्प्युटरमा यो एप चलाउने अर्थात मिटिङ गर्ने तरिकाका बारेमा सिक्नेछौँ ।
सबैभन्दा सुरुमा तपाई यो एप खोल्नुहोस् र साईन ईन गर्नुहोस् । साईन ईन गरेपछि त्यहाँ तपाईले न्यू मिटिङ, जोईन, सेड्युल र शेयर स्क्रिन भन्ने अप्सन देख्नसक्नुहुन्छ । तपाईले न्यू मिटिङमा क्लिक गरेर आफैले नयाँ मिटिङ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ । जोईनमा क्लिक गरेर साथीले दिएको आईडी र पासवर्ड हालेर उक्त मिटिङमा सहभागी हुनसक्नुहुन्छ । सेड्युल मिटिङमा मिटिङको सेड्युल बनाएर अरुलाई ईन्भाईट गर्नसक्नुहुन्छ भने शेयर स्क्रिनबाट भिडियो कलका दौरान तपाईको स्क्रीन अथवा कम्प्युटरमा भएको फाईललाई सिधै मिटिङमा सहभागीहरुलाई देखाउन वा पठाउन सक्नुहुन्छ । नयाँ मिटिङ सुरु गर्न न्यू मिटिङमा क्लिक गर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईको वेबक्याम खुल्छ र तपाईको भिडियो स्क्रीनमा देखिन्छ । त्यहाँ तपाईले कम्प्युटर अडियो प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने अप्सन पनि छान्न सक्नुहुन्छ । भिडियो कलका दौरान तल विभिन्न मेनु अथवा अप्सन तपाई देख्नसक्नुहुन्छ । सबैभन्दा सुरुमा रहेको जोईन अडियो भन्ने अप्सनबाट तपाई आफ्नो आवाज अफ गर्न वा अन गर्न सक्नुहुन्छ । कुनै मिटिङमा अरु बोलेको बेला सुन्नुमात्र पर्छ र आफुले तुरुन्तै बोल्नुपर्दैन भने तपाईले अडियोलाई अफ राख्दा साउण्ड डिस्टर्व आउँदैन । आफु बोल्दा मात्र अन गर्दा हुन्छ । त्यसपछिको दोस्रो स्टप भिडियो अप्सनबाट तपाई आफ्नो भिडियो अफ गर्नसक्नुहुन्छ । यसरी भिडियो अफ गर्दा मिटिङ सुन्न मात्र सकिन्छ तर अन गरेमा फेरि तपाईको भिडियो कल नै हुन्छ । भिडियो अफ गर्दा तपाईको प्रोफाईल फोटा वा तपाईको नाम मात्र स्क्रिनमा देखाउँछ ।
त्यस्तै ईन्भाईटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई अरुलाई ईन्भाईट गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईले मिटिङ कोड र पासवर्ड सिधै अन्य तरिकाले म्यासेज पठाएर पनि मिटिङमा जोडिन आग्रह गर्नसक्नुहुन्छ । तपाईको मिटिङ कोड र पासवर्ड ईन्भाईट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्दा पनि देख्नसक्नुहुन्छ । त्यस्तै म्यानेज पार्टिसिपेन्ट्स् भन्ने अप्सनबाट तपाई मिटिङमा सहभागी भएकाहरुको अडियो अफ गर्न तथा अन्य विभिन्न सेटिङहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ । त्यस्तै शेयर स्क्रीनबाट तपाईले तपाईको कम्प्युटर स्क्रीन वा फाईलहरु मिटिङमा सहभागीलाई देखाउन वा पठाउन सक्नुहुन्छ । त्यस्तै च्याट भन्ने अप्सनबाट तपाई मिटिङमा सहभागी भएकाहरुसँग पनि च्याट गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसमा तपाई कुनै एकजनालाई छुट्टै म्यासेज वा सबै सहभागीहरुलाई एउटै म्यासेज पनि पठाउन सक्नुहून्छ । त्यस्तै रेकर्ड भन्ने अप्सनबाट तपाई जुममा गरिएको त्यो मिटिङ रेकर्ड गर्नसक्नुहुन्छ । रेकर्ड स्टप गरेपछि रेकर्ड भएको मिटिङ बैठक सकिएपछि एमपी फोर फम्यार्टमा सेभ हुन्छ । त्यस्तै रियाक्सन अप्सनबाट तपाई थम्ब अप गर्न र ताली बजाएको रियाक्सन पठाउन सक्नुहुन्छ । यसरी तपाई कम्प्युटरबाट जुम एपलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
मोबाईलबाट जुम एप चलाउनका लागि तपाई सबैभन्दा सुरुमा एप डाउनलोड गर्नका लागि गुगल प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा जानुहोस् । त्यहाँ सर्च बक्समा जुम भनेर सर्च गर्नुहोस् र जुम एपलाई तपाईको मोबाईलमा ईन्स्टल गर्नुहोस् । एप ईन्स्टल भएपछि त्यसलाई ओपन गर्नुहोस् । ओपन भएपछि जोईन अ मिटिङ भन्ने बक्स खुल्छ र त्यसको तल जोईन अ मिटिङ, साईन अप र साईन ईन भन्ने अप्सन देख्नुहुनेछ । तपाई आईडी बनाउन चाहानुहुन्न र कसैले पठाएको मिटिङ कोड र पासवर्डका आधारमा मिटिङमा सहभागी हुनचाहानुहुन्छ भने तपाईले जोईन अ मिटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र मिटिङ सञ्चालन गर्ने साथी, हाकिम वा शिक्षकले पठाउनुभएको मिटिङ कोड र पासवर्ड हालेर मिटिङमा जोईन गर्नुहोस् । जोईन गर्दा तपाई आफ्नो नाम पनि राख्नसक्नुहुन्छ । तपाईले नाम नराखेपनि तपाईको मोबाईलको नाम त्यहाँ देखाईरहेको हुन्छ ।
तपाई यदि आईडी बनाउन चाहानुहुन्छ भने साईन अपमा थिच्नुहोस् र तपाईको ईमेल आईडी, नाम र थर लेखेर तल दिइएको आई अग्री द टर्मस् अफ सर्भिसमा टिकमार्क लगाउनुहोस् । यसो गर्दा एक्टीभेट गर्ने लिंक तपाईको जिमेल एकाउन्टमा आउँछ र त्यसपछि तपाईले जिमेलमा भएको एक्टीभेट लिंकमा थिचेर पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ । पासवर्डहरु कसरी राख्ने भनेर यसअघि नै कम्प्युटरबाट आईडी बनाउने तरिकामा बताईसकेको छु । तपाईले त्यो तरिका अनुसार आफ्नो पासवर्ड राख्नसक्नुहुन्छ । तरिका एउटै हो ।
यसरी आईडी बनाएपछि अब तपाई जुम एपमा तपाईको आईडी र पासवर्ड राखेर साईन ईन गर्नसक्नुहुन्छ । त्यहाँ पनि कम्प्युटरमा देखाईए जस्तै न्यू मिटिङ, जोईन, सेड्युल र शेयर स्क्रीन अप्सन देख्नसक्नुहुन्छ । कम्प्युटरमा जस्तै यसमा पनि सबै अप्सनमा त्यस्तै सुविधाहरु दिइएका छन् । यसमा तपाईले नयाँ मिटिङ सुरु गर्नका लागि न्यू मिटिङमा थिच्नुहोस् र स्टार्ट अ मिटिङमा थिच्नुहोस् । यसमा तपाई व्यक्तिगत मिटिङ अप्सनलाई पनि अन गर्नसक्नुहुन्छ । यसमा तल दिइका अप्सनहरुमध्ये पहिलो अप्सनमा म्युट भन्ने अप्सन दिईएको छ । यसबाट तपाई आफ्नो अडियो म्युट गर्न अर्थात अफ गर्नसक्नुहुनेछ । स्टप भिडियो अप्सनबाट तपाईको भिडियो अफ गर्नसक्नुहुनेछ । शेयर अप्सनबाट तपाईको मोबाईल स्क्रीन वा मोबाईलमा भएका फाईलहरु शेयर गर्नसक्नुहुनेछ । पार्टीसिपेन्ट्स् अप्सनबाट सहभागीहरुको लिष्ट हेर्न र उनीहरुको अडियो कन्ट्रोल गर्नसक्नुहुनेछ र मोर अप्सनबाट थम्ब अप गर्न, ताली बजाउन र मिटिङका अन्य सेटिङहरु मिलाउन सक्नुहुनेछ । यसरी तपाई मोबाईलबाट पनि जुम एप प्रयोग गर्नसक्नुहुनेछ ।
आदरणीय दर्शकविन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । जुम एपका बारेमा अन्य जानकारी चाहिएमा तपाई हामीलाई कमेन्टमा लेख्नसक्नुहुनेछ । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।